बलिउडका यी चर्चित हिरो/हिरोइनले कति पढेका छन्? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ! – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ असार २०, शुक्रबार ०८:४५
काठमाडौं, असार २० – अहिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षको नतिजा प्रकाशन भएको सन्दर्भमा बलिउड स्टारहरूको शैक्षिक योग्यता पनि हाम्रो चासोको विषय हुन सक्छ।
बलिउडकी स्टाइल डिभा दीपिका पादुकोण कहिल्यै कलेज प्रवेश गरिनन्।। बेंगुलस्थित माउन्ट कार्मेल स्कुलबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेकी पादुकोण विश्वविद्यालय भर्ना भए पनि फिल्ममा व्यस्त भएका कारण कलेज जान पाइनन्। यसबारे आज (शुक्रबार) प्रकाशित साप्ताहिकले उनीहरूको विवरण छापेको छः